गजुरेलको गर्जनः सरकार फाँसिवादतर्फ उन्मुख, हिजोको घटना प्रायोजित - Jhilko
गजुरेलको गर्जनः सरकार फाँसिवादतर्फ उन्मुख, हिजोको घटना प्रायोजित
काठमाडौं, १४ पुष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्ध देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकार फाँसिवादतफ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गजुरेलले हिजो सिमा अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार जाने क्रममा आफूहरुलाई गिरफ्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले भने,‘ हिजोको घट्ना पूर्व अनुमानभन्दा बाहिरको घट्ना हो । हामी सरकारलाई जानकारी गराएर नै ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार गएका थियौं । तर, प्रहरी ज्यादती भयो । हाम्रा साथीहरुमाथि अन्धधुन्ध लाठी चार्ज भयो । हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन चाहेका थियौं, तर उहाँ पूर्णतयः बेड रेष्टमा भएको खबर उहाँको सचिवालयबाट आएपछि हामीले पनि रक्षामन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाउने भनेर समय लिएरनै त्यसतर्फ गएका थियौं ।’
गजुरेलले मुलुकमा यतिवेला महँगी, भ्रष्टाचार, दमन, अत्याचार विद्यमान हुँदाहुँदैपनि सबै कुरा सहेर सरकारलाई पनि साथमै लिएर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा आवाज उठाएको बताए । उनले भने,‘हामी त नक्शा बनाउन सक्छौं । तर, के गर्नु हामीले बनाएको नक्शा बैद्य हुँदैन् । सरकारले जारी गर्दा पो बैद्य हुन्छ ।’
उनले नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तहमा वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको लेभलमा किन वार्ता भएन ? मोदी र ओलीबीच वार्ता हुनको लागि के ले रोक्छ ? किन लापरवाही ? हिजो जनकपुरमा मोदीजी आउँदा राजस्थानी लुगा लगाएर भेट्न गएको होईन ?’ उनले आफूहरुले मोदीलाई भेटेर नहुने भन्दै सरकारले यो काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार फाँसिवादतर्फ जान लागेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हिजो हामीलाई पक्राउ गरिएपछि पक्राउ परेका हाम्रा महासचिव परी थापाजीले रक्षामन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, किन यस्तो प्रहरी ज्यादती भनेर सोध्दा उहाँले तपाईहरुलाई अब सरकार फाँसिस्ट भयो भन्न सजिलो भयो भनेर भन्नुभयो ।’
उनले आफूहरुको लागि राष्ट्रियताको मुद्दा नै प्रधान भएको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो लागि देश ठूलो कुरा हो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हाम्रो पार्टीको पहिलो उद्देश्य हो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर भन्न पाईँदैन् ? यसो भन्दा हामीले के अपराध गर्यौं ?’ माईतीघर मण्डलामा पुषको जाडोमा सर्लाहीका उखु किसानहरु आन्दोलित भएको सुनाउँदै उनले वर्तमान सरकारलाई त्यो सुन्ने धैयर्ता नभएको जिकिर गरे ।
विभागले लाइसेन्सको समय सीमासमेत बढाएर १० वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको छ । हाल पाँच...
सबै भन्दा लामो व्यापारिक उडानको परीक्षण
न्यूयोर्कबाट सिडनीसम्मको ननस्टप उडान पूरा गरिएको हो । यो २० घन्टा लामो यात्राको...
एकै दिन तीनसय जुवाडे पक्राउ
भक्तपुर, गुल्मी, बर्दिया, चितवन र दाङबाट प्रहरीले उनीहरुलाई जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा...